KMF/Cnoe : “Zava-dehibe ny fifandanjan-kery amin’ny fampandrosoana” | NewsMada
KMF/Cnoe : “Zava-dehibe ny fifandanjan-kery amin’ny fampandrosoana”
Manjaka tokana ny antokon’ny fitondrana. Zava-dehibe ny fisian’ny hevitra samy hafa, raha ny fijerin’ny eo anivon’ny KMF/Cnoe.
“Tsy tokony hatao tsinontsinona ny fifandanjan-kery. Satria zava-dehibe ny fisian’ny hevitra maro samihafa, indrindra ny hevitry ny vitsy anisa eo amin’ny fampandrosoana.” Io ny fanehoan-kevitry ny sekretera jeneralin’ny KMF/Cnoe, Raharisoamalala Patricia, teny Antanimena, afakomaly, momba ny fanjakan’ny antoko tokana eo amin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao.
Niarahan’ny rehetra nahita, anisan’ny nataon’ny fitondrana amin’izao fotoana izao vaindohan-draharaha ny hampanjakana antoko tokana. Tsara ny fisian’ny antoko tokana eo anivon’ny fitondram-panjakana. Tsara kokoa ny fisian’ny antoko roa samy hafa, miara-mitantana, araka ny fanazavany. Mety avy amin’ny mpomba ny fitondrana sy ny mpanohitra izany.
Tokony ho amin’ny maintany ihany ny fifidianana
Na efa nambaran’ny Praiminisitra Ravelonarivo, ny 10 febroary lasa teo, aza, fa amin’ny volana jona ny fifidianam-paritra, nanamafy ny KMF/Cnoe fa tokony ho amin’ny vanim-potoan’ny maintany ihany ny fanatanterahana fifidianana. Mila tomombana ihany koa ny enti-manana rehetra amin’izany.
Voalazan’ny praiminisitra koa fa zakan’ny fitondram-panjakana malagasy ny fanatanterahana ny fifidianam-paritra, tsy mila fangataham-bola any ivelany. Na izany aza, mampanahy ny KMF/Cnoe ny tsy fahafahan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) hikarakara ny fifidianam-paritra. Tsy voasoritra ao amin’ny tetibolam-panjakana, taona 2016, ny hoenti-manana amin’izany.